First of dhan waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celineynaa aad shaqo cajiib ah, shaqo wanaagsan !!!
Waxaan dhibtoonaya ahay in ay isticmaalaan transposh la Mudanayaasha cusub turjumaan Bing taas oo uu leeyahay hab hadda cusub ee la isticmaalayo aqoonsiga macmiilka oo muhiim ah clientsecret .
In transposh u weydiiso API Bing hal , Si kastaba ha ahaatee waxaa la Waxaan u rajeynayaa 2 beero cliendID kasta oo ClientSecret
Waxaan laga yaabaa in khalad ah in hab laakiin aan daraasad ilaa iyo haatan ayaa i hoggaamin gabagabo this… Raadi si aad caawimo iyo talo haddii ay suuragal tahay.
aad Thak for reading aan arrinta 🙂
January 11, 2013 at 12:28 at the
Waxaan la ka kooban comments aad ku heshiisaan, laakiin waan kuu sheegi doonaa waxa ay xaaladdu tahay iyo sababta Anigu waxba ma aan samayn wax ku saabsan
1. The xal free muhiimka ah ee hadda ka shaqeeya wax xunna
2. Shuqullada muhiim ah jirka ah qof kasta oo uu leeyahay ee muhiimka ah sida a
3. Furaha cusub waxay u baahan tahay hab cusub oo muhiim ah, lalana xiriiro meel gaarka ah (10 nolosha daqiiqo) taas oo ah halkii ay wax aad looga xumaado
Sidaas, haddii aan u hagaajin doonaa, Waxaan doonayaa in la sameeyo tan oo shaqo iyo imtixaan, halka yeesho dadka isticmaala furaha hadda.
Markii aan samayn doonaa? Waxaa macquul ah oo keliya haddii uu xal ugu horeysay bilaabo inuu si baas ku guuldareysato, ama aniga qudhaydu waxaan ka heli leh waqtiga firaaqada ah oo aad u badan (ma u badan tahay 🙂 )
Waxaan rajeynayaa in ay tani ku anfacdo (ama ugu yaraan waxa ay sharxaysaa)
Thanks for your taageerada… 🙂
January 22, 2013 at 1:30 at the
Waydiiyaa, mahad waayo, shuqulkiinna on plugin this.
Sida caadiga ah la updates ah, waxaa loo baahan yahay si ay u tagaan parse.php iyo beddelo qaar ka mid ah goobaha ay. Markan aan loo eegin sida bedelaa goobaha fasaxyada xarakayn iyo nasashada tirada, turjumaadaha aan hore u site oo dhan waa la waayay. Waan ogahay in aysan tahay badiyay, kaliya si lama filaan ah ma arki karo dheer. Maxaa ku dhacay parser iyo sida baan ka heli karaa weedho aan loo tarjumay in ay mar kale ku shuban?
January 22, 2013 at 1:32 at the
Isbedel kuwa parser.php helay guureen tab sare ee goobaha ay, si aadan u yeelan doonaan in ay mar dambe wax samayn in gacanta 🙂
January 22, 2013 at 1:47 at the
OOOH, Waxaan EEG. Waxaa la gaaray dhinaca WordPress! Go'an. Waxaa jeclaada!!!! Thanks, Waydiiyaa.
January 27, 2013 at 1:35 at the
Waxaan jeclaan lahaa in Aad ayaad u mahadsantahay for aad transposh. waxaa sameeyey website kasta ama sahlan blog in uu diidanaa adduunka, xitaa ay yihiin newbie kaliya aniga oo kale. i leeyihiin codsan transposh ah 0.9.0 plugins in widget galeeysid aan, waana shaqada.
laakiin, i waxay u baahan yihiin wax ka badan oo aad ka, fadlan. waxa kaliya ee aad info, page guriga waa statics aan galeeysid dabcan. 😀 in sababta, aan booqdaha aan si toos ah u dooran karaan afkooda. Waxaan qabaa inaan u baahan code gaaban. aad i siin karaa fadlan?
January 27, 2013 at 1:39 at the
Waad u arki kartaa Su'aalaha iyo heli code aad ka mid noqon kara in aad theme,
Waxaa sidoo kale jira shortcodes, oo dhan oo iyaga ku saabsan waxaad ka akhrisan kartaa boggayaga site horumarinta: http://trac.transposh.org
Waxaan u soo jeedin in lagu daro waafaqid la engine search o wordpres ah. Hadda waxaan ku raadin kartaa oo kaliya in languaje default ah
magacayga Save, email, iyo website in browser this for soo socda wakhti aan comment ah.
Changeset in Transposh-WordPress [c77d808]: Will it work now? July 21, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [200b2fe]: Debugging the update stuff takes its toll July 21, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [61dccaf]: Not hiding from wordpress, but we should not hide from ourselves July 21, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [ffe7e28]: v1.0.2 release is imminent July 20, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [4deacb5]: Updated POT file, finally July 19, 2018
kismet on Version 1.0.0 – Wakhtigii waa yimid
dalabyo on Version 0.9.9.2 – Ma git a